विश्वकप फाइनल : फ्रान्स र क्रोएशियाबीच रोमाञ्चक खेल, पहिलो हाफमा फ्रान्स २–१ ले अगाडि
काठमाडौं– रसियामा जारी विश्वकप अन्तर्गत आज भइरहेको फाइनल खेल रोमाञ्चक बनेको छ । पहिलो हाफमा फ्रान्स २–१ ले अगाडि रहेको छ। मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालमा भइरहेको खेलको पहिलो हाफमा फ्रान्सले क्रोएशियाविरुद्ध पहिलो गोल गर्यो । क्रोएशियाका मारियोले आत्मघाती गोल गरेसँगै फ्रान्सले अग्रता बनायो । त्यसपछि बेल्जियमका इभानले २८ औं मिनेटमा गोल गर्दै बराबरी गरे । तर, त्यो बराबरी क्रोएशियाका खेलाडीले डिबक्स एरियाभित्र ह्याण्ड गरेपछि टिक्क सकेन । पेनाल्टीमार्फत एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गर्दै टोलीलाई २–१ को अवस्थामा पुर्याए ।
असार ३१, २०७५ मा प्रकाशित
फाइनलमा फ्रान्सले पाएको पेनाल्टीका विषयमा उठ्यो विवाद
च्याउ खेती : सय लगानी, हजार आम्दानी ! सुर्खेत- सय रुपैयाँ लगानी गरेर हजार आम्दानी हुन्छ भनेर कोही कसैले भन्यो भने सायदैले पत्याउलान् । तर नपत्याएर पनि सुख भने छैन । वीरेन्द्रनगरका एक युवा उद्यमीले सय रुपैयाँ लगानी गरेर ए...
विप्लवलाई 'नक्कली कमरेड'को संज्ञा दिँदै ओलीले भने- जेलमा बसालेर भए पनि मूलधारमा ल्याइन्छ !
भलिबल खेल्ने क्रममा झगडा हुँदा युवकको मृत्यु
कसैले चुनौती दिन्छ भने राज्य चूप लागेर बस्न मिल्दैन : नेपाल
सांसदलाई विकास निर्माणको बजेट दिनु भ्रष्टाचार : विवेकशील साझा पार्टी